Nnwom 36 NA-TWI - Onipa bɔne su - Bɔne kasa kyerɛ - Bible Gateway
Nnwom 35Nnwom 37
Nnwom 36 Nkwa Asem (NA-TWI)
36 Bɔne kasa kyerɛ ɔdebɔneyɛfo ma edu ne koma mu pɛɛ; ɔpa Onyankopɔn na onni no ni. 2 Esiane sɛ odwen n’ankasa ho nti, osusuw sɛ Onyankopɔn renhu ne bɔne mmu no fɔ. 3 Ne kasa yɛ bɔne na atoro ahyɛ no ma; afei ɛnyɛ ade a nyansa wɔ mu na ɔyɛ. 4 Ɔda mpa so no, na ɔredwen bɔne ho. Biribiara nni hɔ a ɔyɛ a, eye. Na ɔmpɛ sɛ ogyaa bɔneyɛ.